त्यसपछि त ट्याक्सी चढ्नै छोड्दिएँ - CHHEPARO
त्यसपछि त ट्याक्सी चढ्नै छोड्दिएँ
December 4, 2016 lchapagain4@gmail.com News Source 0
म भर्खर भर्खरै नेपाल आएको थिएँ । विवाह पछि आएको । मलाई त केही थाहा नै थिएन । मलाई त्यो सानो के… टेम्पो चढ्न साह्रै असहज लाग्ने । आत्तिने के । उकुसमुकुस हुन्छ भनेर । अनि श्रीमानलाई म त त्यसमा चढ्दिन भन्थें । अनि मलाई श्रीमानले जहाँ गए पनि ट्याक्सी चढाउनु हुन्थ्यो । तर मलाई थाहा थिएन ट्याक्सीले भाडा बढी लिन्छ । पछि यसो विचार गरें त है भाडा कति धेरै लिंदो रहेछ । त्यसपछि त मैले ट्याक्सी चढ्नै छोड्दिएँ । विस्तारै टेम्पुमा बानी गरें ।
परिवारबाट मलाई कुनै समस्या थिएन र छैन पनि । संगीत सिक्दै गर्दा पनि मलाई मेरो घर परिवार (जन्म घर) बाट कुनै समस्या थिएन । अहिले कर्म घरबाट पनि समस्या छैन । बिहेपछि कसरी घर परिवारसँग नजिक हुने कसरी उनीहरुलाई चिन्ने भयो । श्रीमानले धेरै सहयोग गर्नुभयो । पहिले मणिपुरमा नै बसोबास भए पनि अहिले काठमाडौं बस्छौ ।
मेरो करियर स्टप होला जस्तो भएपछि श्रीमानले मलाई यतै नेपालमा सांगीतिक यात्रा सुरु गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले मलाई नेपाली तारामा भाग लिन सल्लाह दिनुभयो । मलाई त नेपाली तारा भनेको के हो, के हो भन्ने भयो । नेपाल स्टार हो कि ? के हो के हो ? है ।
लगभग म नजाने पक्षमा नै थिएँ । तर श्रीमानले बल गरेपछि भोलि जस्तो सुरु हुने आज जस्तो म नेपाली तारामा अडिसन दिन गएँ । लामो लाइन थियो । उता मणिपुर भारतमा स्थापित भइसकेको कलाकार । घाममा लामो लाइन बस्नुपर्दा कस्तो कस्तो लाग्यो । यसैगरी सुरु भयो । नेपालमा संगीतिक यात्रा । नेपाली तारामा छनौट हुँदै टप १० मा पुगें । तर त्यतिबेला प्रेगनेन्ट भएको भएर मैले छोडें ।
पहिलो बच्चा मेरी छोरी भयो । त्यतिबेला मेरो श्रीमान म सँग हुनुहुन्थेन । म धेरै मिस गर्थें । धेरै धेरै गाह्रो भयो । प्लान गरेर जन्मेको बेबी हो । केही दुःख भएपनि म खुशी थिएँ । बच्चा जन्मँदा कि त माइतीको कोही हुनु पर्ने रहेछ । कि त श्रीमान अनिवार्य हुनुपर्ने रैछ ।
पहिलो बच्चामा दुःख भएको भएर नै दोस्रो बच्चा जन्मँदा श्रीमान मसँगै बस्नुभयो । श्रीमानको केसमा म साह्रै भाग्यमानी । मैले कहिलेकाहीँ जिस्काएर गीत गाउन पनि त्यतिकै भयो, छोडि पो दिन्छु भन्दा हैन त्यसो नगर । तिमी गर्न सक्छौ । बरु म केटाकेटी हेरेर बस्न तयार छु । तिमीले आफ्नो सांगीतिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ । श्रीमान कामका लागि क्यानडा हुनुहुन्छ ।
धेरैजसो हामी आमा छोराछोरी गीत बजाएर सँगै नाच्छौं । निकै रमाईलो हुन्छ । अहिले केटाकेटी स्कूल जान्छन् । बिहान खाना खुवाएर उनीहरुलाई स्कूल पठाएपछि म रेकडिङका लागि समय मिलाउँछु ।
अहिले मेरो एकजना मिल्ने साथी छ । त्यसैले त्यति गाह«ो छैन । उनीसँग मेरो नेपाली तारामा हुँदा भेट भएको हो । उनीसँग भेट भएपछि एक्लोपना दूर भयो । हामी जहाँ जान्छांै, सँगै जान्छौ । हामीले हाम्रो दोस्ती अझ गहिराइमा पुर्‍याउन एउटा एल्बम निकाल्यौ ।
साथ देउ बनेर साथी
यो सुख दुःख आधी आधी
तिम्रो सिरानी बनेको छ मेरो छाती
मेरो भरोसा तिमीमाथि
यो गीतको एल्बमको नाम पाइला हो । अनि मेरो साथीको नाम रोजिना गुरुङ हो । हामी दुःखसुख साट्छौ । सँगै हुन्छौ । पहिलाको जस्तो गाह्रोसाह्रो छैन । उसको र मेरो रिलेसन अहिले दिदी र बहिनी जस्तै छ ।
मणिपुरमा नै जन्मिहुर्की गरेकाले मलाई नेपाली भाषामा चाहिँ केही समस्या छ । कुनै कुनै शब्द बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ । त्यति साह्रो त भाषामा समस्या त होइन तर टिपिकल वर्ड भने बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ । तर ठमेल बजार गीत गाउँदा भने त्यति गाह्रो भएन । एकदम सरल र सहज तरिकाले २०/२५ मिनेटमा नै गीत रेकर्ड भयो । यो गीत चलेपछि अहिले अरु गीतमा पनि अफर आउन थालेको छ । कस्तो होला भन्ने डर र चिन्ता थियो । अहिले खुशी छु । राम्रो रेस्पोन्स आएको छ । काम गर्ने हौसाला मिलेको छ ।
अहिले चलचित्र लुट २ को गीत ‘लैजाउ घुमाउन मलाई ठमेल बजार, ट्याउसी चढाउँदै, लाइदिउँला चोखो पियार, हो परान लाइदिउँला चोखो पियार ।’ हिट हुँदैछ । म भने चिनिने र स्थापित हुने क्रममा नै छु ।
मलाई खासै खाना पकाउन आउँदैन । दाल भात सामान्य पकाउँछु । केटाकेटी मिठो मानी खाइदिन्छन् मामुले पकाएको भनेर । म फुरुंग पर्छु ।
(गायिका मिना पोखरेल निरौलासँग दीपा तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित )
Samakon | समकोण – बाल बिवाह रोक्न के गर्नु पर्ला ?
नेपाली मिडियामा तरकारीवाली